Inona Ilay Atao hoe Andro Fitsarana?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Zoloa Éwé
Milaza ny Baiboly fa “efa nanondro andro iray izay kasainy hitsarana ny tany onenana” Andriamanitra. (Asan’ny Apostoly 17:31) Maro ny olona tsy tia an’izany hoe tsaraina izany. Ary ianao?
AZA matahotra anefa, fa fotoana hampisehoan’Andriamanitra ny fitiavany ny Andro Fitsarana. Hanao zavatra tsara maro ho an’ny olona izy, anisan’izany ireo efa maty. (Matio 20:28; Jaona 3:16) Nahoana no ilaina io andro io? Inona marina no hitranga amin’izay?
Nahoana no ilaina?
Tsy nataon’Andriamanitra hiaina vetivety eto an-tany fotsiny ny olona mba hotsapaina, ary avy eo hiaina any ankoatra. Nataony hiaina mandrakizay eto kosa isika. Nikomy taminy anefa i Adama sy Eva, na dia lavorary aza ny sainy sy ny vatany. Tsy afaka niaina mandrakizay intsony àry izy ireo, sady namindra ota sy fahafatesana tamin’ny taranany.—Genesisy 2:15-17; Romanina 5:12.
Haharitra arivo taona ny Andro Fitsarana. * Hahazo ny zava-drehetra nafoin’i Adama sy Eva ny olona amin’izay. Milaza ny Asan’ny Apostoly 17:31 hoe ny “tany onenana” manontolo no hotsaraina. Hiaina mandrakizay eto an-tany ireo hita fa manao ny tsara, ary ho sambatra. (Apokalypsy 21:3, 4) Hotanterahin’Andriamanitra amin’ny Andro Fitsarana àry ny fikasany ho an’ny tany sy ny olombelona.
I Kristy Jesosy no notendren’Andriamanitra ho Mpitsara. Milaza ny Baiboly fa “hitsara ny velona sy ny maty” izy. (2 Timoty 4:1) Iza ireo “velona” ireo? Ahoana no hahavelona indray eto an-tany an’ireo efa maty?
Hitsara ny “velona” i Jesosy
Efa akaiky ny faran’ity tontolo ity. Hofoanan’Andriamanitra ny tontolon’i Satana manontolo, anisan’izany ireo ratsy fanahy. Hisy ho tafavoaka velona amin’io fotoana io, ary izy ireo ilay antsoina hoe “velona”, izay hotsaraina.—Apokalypsy 7:9-14; 19:11-16.
Misy lehilahy sy vehivavy 144 000 hatsangana amin’ny maty mba ho any an-danitra. Hitondra ny tany miaraka amin’i Kristy izy ireo, mandritra ilay Andro Fitsarana. Ho mpanjaka sy mpisorona izy ireo, ary hanao izay handraisan’ny olona soa amin’ny soron’i Jesosy. Ho lasa lavorary tsikelikely àry ny vatana sy ny sain’ny olona.—Apokalypsy 5:10; 14:1-4; 20:4-6.
Tsy havela hamitaka ny olona i Satana sy ireo demonia, mandritra ilay Andro Fitsarana. (Apokalypsy 20:1-3) Havela hitsapa ny olon-drehetra kosa izy aorian’izay. Ho hita eo raha hivadika toa an’i Adama sy Eva izy ireo na tsia. Hiaina mandrakizay ao amin’ny tany lasa paradisa izay tsy mivadika. Horinganina tanteraka miaraka amin’i Satana sy ny demonia kosa izay mikomy amin’Andriamanitra.—Apokalypsy 20:7-9.
Hotsaraina ny “maty”
Resahin’ny Baiboly fa ‘hitsangana’ ny maty, mandritra ny Andro Fitsarana. (Matio 12:41) Hoy i Jesosy: “Ho avy ny fotoana handrenesan’izay rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy ireo. Koa izay nanao ny tsara dia hatsangana ho amin’ny fiainana, fa izay zatra nanao ratsy kosa hatsangana ho amin’ny fanamelohana.” (Jaona 5:28, 29) Tsy ny fanahin’ireo maty akory no hitsangana. Tsy mahalala na inona na inona ny maty, ary tsy manana fanahy tsy mety maty. (Mpitoriteny 9:5; Jaona 11:11-14, 23, 24) Ilay olona mihitsy no hatsangan’i Jesosy eto an-tany.
Hatsangana ao amin’ilay paradisa eto an-tany ny maty, rehefa hanjaka i Kristy
Ny zavatra nataony talohan’ny nahafatesany ve no hitsarana an’ilay olona? Tsia. Milaza ny Baiboly fa “izay maty dia afaka madiodio amin’ny fahotany.” (Romanina 6:7) Hotsaraina ‘araka izay hataony’ mandritra ny Andro Fitsarana ireo hatsangana amin’ny maty, toy ireo tafavoaka velona amin’ny faran’ity tontolo ity ihany. (Apokalypsy 20:12, 13) Sambany ny maro aminy vao hianatra momba an’i Jehovah Andriamanitra sy ny fitsipiny. Havela hanaporofo àry izy ireo raha tiany ny hankatò an’Andriamanitra na tsia. Arakarak’izay hataony no hahazoany fiainana mandrakizay eto an-tany na handringanana azy.
Tsy tokony hatahorana
Tsy hoe hahazo fampianarana avy amin’Andriamanitra fotsiny isika amin’ny Andro Fitsarana, fa ho afaka hankatò izany koa, ka handray soa. Eritrereto ny hafalianao rehefa ho tafaraka indray amin’ireo havanao efa maty ianao, ary ho lavorary ianareo!
Eritrereto ny hafalianao rehefa ho tafaraka indray amin’ireo havanao efa maty ianao
Havelan’Andriamanitra hotsapaina ny olona, amin’ny faran’ilay Andro Fitsarana. Tsy mampatahotra anefa izany. Ho efa vonona tsara hiatrika an’io fitsapana io mantsy ny olon-drehetra. Fotoana hanafoanan’Andriamanitra tanteraka ny voka-dratsin’ny fikomiana tany Edena àry ny Andro Fitsarana.
^ feh. 7 Tsy voatery ho 24 ora foana ny iray “andro” ao amin’ny Baiboly. Jereo ny Genesisy 2:4.
Inona ilay atao hoe Andro Fitsarana?—Asan’ny Apostoly 17:31.
Iza no hotsaraina?—2 Timoty 4:1.
Haharitra hafiriana ny Andro Fitsarana?—Apokalypsy 20:4-6.
Hizara Hizara Inona Ilay Atao hoe Andro Fitsarana?
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Janoary 2010
Hizara Hizara MIFOHAZA! Janoary 2010
MIFOHAZA! Janoary 2010
Inona no Antony Hiverenan’i Kristy?
Hanova ny Tany ho Paradisa i Jesosy ary Hamita ny Asa Nasaina Nataony
Mbola Misy Antenaina ve ny Amin’ireo Maty?